IPHONE အတွက်မမြင်ရတဲ့ VKONTAKTE - IOS အတွက် - 2019
အင်တာနက်ပေါ်တွင်အတွက်သင်အလွယ်တကူအမြဲလေးနက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲဖယ်ရှားပစ်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်သောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးထကောက်နိုငျသောကွောငျ့နေ့စွဲစေရန်, anti-virus program ကအတော်လေးသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်။ သင်တန်း၏, အသုံးပြုသူကို download လုပ်ပါအဘယျရှေးခယျြနှင့်အဓိကတာဝန်ကသူ့ပခုံးပေါ်နေဆဲတည်ရှိသည်။ ကြောင်းလုံခြုံရေးဆော့ဝဲနှင့်အတူပဋိပက္ခအတော်လေးအန္တရာယ်ကင်းအစီအစဉ်များရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်မကြာခဏယဇျပူဇျောပါစေနှင့်အချို့သောအချိန် antivirus ကိုများအတွက်ပယ်ရန်ရှိသည်။
ကွဲပြားခြားနားသော Anti-Virus မှာကာကွယ်မှုနည်းလမ်းဟာ Off ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဥပမာ, အခမဲ့ app ထဲမှာ 360 စုစုပေါင်းလုံခြုံရေးရိုးရှင်းစွာပြု, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လိုချင်သော option ကိုလက်လွတ်ဖို့မအနည်းငယ်သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ယာယီကို disable ကာကွယ်မှု
စုစုပေါင်းလုံခြုံရေး 360 အဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုဗဟုရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူကမည်သည့်အချိန်တွင်မပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားနိုင်လေးပါးလူသိများတဲ့ antivirus ကို၏အခြေခံပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကကို turn off ပင်ပြီးနောက် antivirus program ကတက်ကြွနေဆဲဖြစ်သည်။ လုံးဝ၎င်း၏ကာကွယ်ရေးကို turn off မှဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်:
လက်မှတ်နှင့်အတူအိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: တွင်".
အခုတော့ button ကို click "Settings" ကို.
လက်ဝဲဘက်တွေ့ရှိမှု၏အောက်ခြေတွင် "Disable လုပ်ထားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး".
နှိပ်ခြင်းဖြင့်ပိတ် Accept "အိုကေ".
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, လုံခြုံရေးကိုပိတ်ထားသည်။ ပြန်ဖွင့်ဖို့, သင်ရုံကြီးတွေ button ကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ် "Enable"။ သငျသညျရိုးရှင်းသောလုပျနိုငျနှင့် Tray ထဲက program ကို icon ပေါ်တွင် right-click, ပြီးတော့လက်ဝဲရန် slider ကိုဆွဲယူနှင့်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်လက်ခံဖို့။
သတိထားပါ။ သငျသညျကိုင်တွယ်လိုအပ်ချက်ချင်းကြောင်းပြီးနောက် antivirus ကိုဖွင့်, တစ်ဦးရှည်လျားသောကာလအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမရှိဘဲစနစ်မချန်မထားပါနဲ့။ သငျသညျယာယီကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်မည်သည့် Anti-virus software ကို disable လုပ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်သင်သည် Kaspersky, Avast, Avira, McAfee ကအတူကလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: Sermon Demonology2(စက်တင်ဘာလ 2019).